မားကတ်တင်းဆိုတာ စိတ်ကူးအိုင်ဒီယာတွေကို ပျံ့နှံ့အောင်လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေ ဆင်ပြီးတော့ လူတွေစိ တ်ဝင်စားဖို့လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ အဖြစ်မှန်ထက်ပိုပြီးချဲ့ကားပြောဆို တာတွေ၊ လှည့်စားတာတွေလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် မားကက်တင်းသမားကောင်းတွေက ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို မပြောကြဘဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွေကိုသာ အဓိကဖန်တီးကြပါ တယ်။ ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ ထင်ရှားတဲ့ စာရေးသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Seth Godin က All Marketers are Liars ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ မားကက်တင်းသမားတွေရဲ့ စဉ်းစားပုံတွေနဲ့ စားသုံးသူတွေအတွက် ကောင်းကျိုးရော ဆိုးကျိုးပါသက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ဖန်တီးလေ့ရှိပုံ အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းပုံပြင်တွေကို ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ဖန်တီးဖော်ပြတာက ဖောက်သည်တွေကို ရည်ရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးတော့ အကျိုးအမြတ်လဲ ပိုကောင်းမွန် တယ်ဆိုတာကို လုပ်ငန်းတွေက လက်ခံထားကြပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ ထူးခြားတဲ့မားကက်တင်းအတွေးအမြင်တွေကို ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့ စာရေးဆရာ Seth Godin က ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လိုအချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားလိုက်မြင်လိုက်ရတဲ့ အချို့အကြောင်းအရာတွေ၊ အဖြစ်အ ပျက်တွေက လူတွေရဲ့ စိတ်အာရုံထဲမှာ စွဲမြဲနေပြီးတော့၊ မမေ့နိုင်အောင် ဖမ်းစားနိုင်စွမ်း ရှိ ကြပေမယ့် အချို့အကြောင်းအရာတွေကတော့ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ လူတွေက မမှတ်မိ ကြတော့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင်လူတွေက မှတ်မိနေတတ်တဲ့ အကြောင်အရာတွေမှာ ဘယ်လို လက္ခဏာရပ်တွေ ရှိနေ တာလဲ? Stanford တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Chip Health နဲ့ Aspen Institute က အတိုင်ပင်ခံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Dan Health တို့က Made to Stick ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ လူတွေပြောဆိုလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ အ ခြားလူတွေရဲ့ စိတ်အာရုံထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိနေစေဖို့အတွက် သက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့ အ ချက်တွေကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း မိမိတို့အသိပေးချင်တဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ကြော်ငြာသတင်းစကားတွေကို စားသုံးသူတွေဆီကို ရောက်ရှိဖို့အ တွက်ငွေအမြောက်အများ သုံးစွဲပေမယ့်၊ အချို့အကြောင်း အရာတွေကိုပဲ စားသုံးသူတွေ ကမှတ်မိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဟာအခြားလူတွေရဲ့ စိတ်အာရုံ ထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိနေစေဖို့အတွက်က သမားရိုးကျစ ကားပြောဆို တဲ့ပုံစံနဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုအရာတွေက သက်ရောက်မှုရှိစေလဲ ဆိုတာတွေကို Made to Stick စာအုပ်ထဲမှာ အချက် ၆ ခုကို အတိုကောက်စာလုံးအနေ နဲ့ SUCCES လို့ရေးသားခဲ့ပြီး တစ်ခုချင်းစီကို အသေးစိတ်ရေးသား ဖော်ပြထားပါတယ်။
စမတ်ကျကျအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာ သာမန်ထက်ပိုပြီးထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊ လျှို့ ဝှက်ချက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ ရလဒ် ကောင်းတွေရဖို့အတွက် လက်တွေ့ကျကျနည်းလမ်းတွေကို ဘယ်လိုအသုံး ချမလဲဆိုတာ ကိုသိထားဖို့ပဲ လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ “ အလုပ်ကိုစမတ်ကျကျလုပ်ပါ၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မလုပ်ပါနဲ့” ဆိုတဲ့စကားက တကယ်တော့ အလုပ်ပြီးမြောက်မှုပမာဏကို မြှင့်တင်နိုင်စွမ်း ရှိဖို့နဲ့ အလုပ်အတွက် အားအင်သုံးစွဲရတာကို လျော့နည်းသက်သာစေဖို့အတွက် ရည် ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆော င်ရည်မြှင့်တင်မှုနဲ့ ဘဝအောင်မြင်ရေး နယ်ပယ်မှာ နာမည် ကျော်ကြားတဲ့ စာရေးသူနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Jack Collis နဲ့ Michael Leboeuf တို့ရေးသား ထားတဲ့ Work Smarter, Not Harder ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ စမတ်ကျကျအလုပ်လုပ်ခြင်း အားဖြင့်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ ရလဒ်ကောင်းတွေရရှိဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရ မယ့်အချက်တွေကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်နေ့တာအချိန်တွေက အကန့်အသတ်ရှိပေမယ့် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်တွေက ပိုပိုများလာပါတယ်။ ဘဝမှာမျှော်မှန်းထားတာတွေအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အချိန် တွေကိုအကျိုးရှိရှိ အသုံးချပြီးတော့ အလုပ်ပြီးမြောက်မှုပမာဏ ကို မြှင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ လူတိုင်းရဲ့ ဘဝတစ်လျောက်မှာ ဆောင်ရွက်မယ့် အလုပ်တွေအ တွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေ ရရှိနိုင်စေဖို့ အဓိက အချက် (၁၂) ချက်ကို အကြုံပြု ရေး သားထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်ကိုပဲလုပ်လုပ် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းကို မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမှာ ကျွမ်းကျင်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့အ တွက်များစွာ အကျိုးရှိစေပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှာ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းမှုဘာသာရပ်ကို အထူးပြုသင်ကြားသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Professor Michael Wheeler ရေးသားထားတဲ့ The Art of Negotiation စာအုပ်မှာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိရှိထားရမယ့်အချက်တွေကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်တော့ လူတိုင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူနိုင်တဲ့အတွက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမှာလည်း မတူညီနိုင်တာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ လက်တန်းကြံဆ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကသာ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကို အချက် (၉) ချက်နဲ့ အဓိက တင်ပြ ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့အချိန်မှာပြောင်းလဲလာတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နည်းပညာသစ်တွေကြောင့် အရင် တုန်းကလို သမားရိုးကျမားကတ်တင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေက ထိရောက်မှုအားနည်းလာ ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ကြော်ငြာတာကို အဓိကလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ မားကတ်တင်းလုပ် ဆောင်ချက်တွေကို Interruption Marketing လို့ရည်ညွှန်းခေါ်ဝေါ်ပြီးတော့ စားသုံးသူ တွေအနေနဲ့ မိမိဆီကို လုပ်ငန်းတွေရဲ့ မားကတ်တင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေ ရောက်ရှိခွင့်ပြု မယ်၊မပြုဘူးဆိုတာကို စားသုံး သူတွေ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးလိုက်တာကို Permission Marketing လို့ခေါ် ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ ထူးခြားဆန်းသစ် တဲ့ မားကတ်တင်း အယူအ ဆတွေကို ရေးသားတင်ပြရာမှာထင်ရှားတဲ့ စာရေးသူ Seth Godin ရဲ့ Permission Marketing နဲ့ပက်သတ်တဲ့ အယူအဆတွေကို ရှင်းလင်းဖော်ပြ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိလုပ်ငန်းရဲ့အကြောင်းကို လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာ ကြားဖြတ်ကြော်ငြာတာကအလုပ်မဖြစ်တော့တဲ့အတွက် အခြားနည်းလမ်းကို စဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ အဲဒီအတွက်အဖြေတစ်ခုကတော့ Permission Marketing ဖြစ်တယ်လို့ စာရေးသူ Seth Godin ကဆိုပါတယ်။ Permission Marketing ရဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ ကုန် ပစ္စည်းကို ချက်ချင်းရောင်းရဖို့ထက် စားသုံး သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မာမှုရရှိအောင် အရင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင် စေဖို့အတွက် Permission ဆိုတဲ့ စားသုံးသူတွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရာမှာ လုပ်ဆောင် ရမယ့် အဆင့် (၅) ဆင့်ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတွေ၊ အောင်မြင်ကြီးပွားရေး ဟောပြောပွဲတွေ၊ စာအုပ်တွေကြောင့် လူတိုင်းက အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ မြန်မြန်ဆန် ဆန်ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်ကြပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့နာမည်ကျော်ဟောပြောသူနှင့် စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Darren Hardy က Compound Effect ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရဖို့နဲ့ အဲဒီအောင်မြင်မှုကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ဖို့အတွက် မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Compound Effect လို့ပြောတဲ့ ဆင့်ပွားတိုးတက်မှု ဆိုတာက အရာတစ်ခုဟာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုကြောင့် တသတ်မတ်တည်း တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပွားလာမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်မှာ ကြီးမားတဲ့ရလဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ မိမိရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မိမိဘဝအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် အလေ့အထတွေအနေနဲ့ စွဲမြဲသွားအောင် တည်ဆောက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီသင်ခန်းလေးမှာ စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့ ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ထားရမယ့် အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို နားလည်သိရှိစေရန် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
Brand ဆိုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ဟာ လုပ်ငန်းတွေအတွက် ဘာကြောင့်အရေးပါတာလဲ? Apple, Nike, IBM စတဲ့နာမည်ကျော်အမှတ်တံဆိပ်တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသိအများ ဆုံးဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ? ဒီအချက်တွေကို ကမ္ဘာကျော် Brand တွေရဲ့အတိုင်ပင်ခံ သူတစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Denise Lee Yohn က What Great Brands Do ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ လုပ်ငန်းများအတွက် ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ အပြိုင် အဆိုင်များတဲ့စီးပွာရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ စားသုံးသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု ကိုရရှိတဲ့ Brand တစ်ခုကိုတည်ဆောင်ထားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Brand အမှတ်တံဆိပ်ဆိုတာ ကုမ္ပဏီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်မှာ လူတွေမြင်တဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်သက်သက်မဟုတ်ဘဲ၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးကို ထင်ဟပ်နေစေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ ကမ္ဘာကျော်အောင်မြင်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့အချက် (၇) ချက်ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်အချိန်မှာ လူပြောအများဆုံးနဲ့ ပညာရှင်တွေအများဆုံး ဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ EQ ဆိုတဲ့ "စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်" ဖြစ်ပါတယ်။ ဟားဗက်တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ စာရေးဆရာနဲ့စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Daniel Goldman က သူရေးသားခဲ့တဲ့ "Emotional Intelligence" ဆိုတဲ့ ဒီစာအုပ်မှာ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖော်ပြထားပါတယ်။
၂၁ ရာစုမှာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ လူသားတွေရဲ့ သဘာဝနှင့် သိစိတ်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင် ချက်တွေကို ပိုမိုနားလည်နိုင်ဖို့ သုတေသနတွေပြုလုပ်တဲ့အခါ လူတွေရဲ့ ဉာဏ်ရည်ပိုင်း ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမှာ IQ ဆိုတဲ့ မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နဲ့ EQ ဆိုတဲ့စိတ်ခံ စားမှုပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည် ဆိုပြီးတော့ အပိုင်း (၂) ပိုင်းရှိတာကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါ တယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့ EQ နဲ့ပက်သတ်တဲ့ အချက် (၅) ချက်ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်သူတွေရဲ့ အကြောင်းကို လေ့လာ ကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးနဲ့ အပြင်း အထန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေရဲ့ ရလဒ်ကြောင့်လို့ ပြောပြ ကြတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ video မှာတော့ ကမ္ဘာကျော်စာ ရေးဆရာနဲ့ဟောပြောသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Malcolm Gladwell ရေးသား ထားတဲ့ Outliers ဆိုတဲ့စာအုပ်မှ ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူတွေ အကြောင်းကို ပြောပြထားပါ တယ်။
Outliers ရဲ့တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ “ တမူထူးခြားသူများ သို့မဟုတ် သမားရိုးကျဓလေ့ ထုံးစံတွေထဲကနေ ခွဲထွက်နေတဲ့လူများ” လို့ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ သမားရိုးကျထက်ပိုပြီး ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိသူတွေဖြစ်လာဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
"ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံးမန်နေဂျာတွေဟာ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေဟာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားကြတာလဲ" "ဘယ်အချက်တွေကြောင့် သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အကျိုးအမြတ်များစွာ ရရှိစေတာလဲ" "သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့အတွက် ဘာတွေဆောင်ရွက်ကြသလဲ" ဆိုတာတွေကို အတိုင်ပင်ခံနဲ့စာရေးသူတစ်ဦးဖြစ်သူ Marcus Buckingham ဟာ နာမည်ကျော်အကြံပေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ဂဲလ်လပ်အဖွဲ့အစည်းကို ဦးဆောင်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတွေကို အခြားစာရေးသူ Curt Coffman တို့အတူ ပူးတွဲရေးသားထားတဲ့ "First, Break all the Rules" - "ပထမဆုံး သမားရိုးကျစည်းမျဉ်းတွေကို ချိုးဖောက်လိုက်ပါ" ဆိုတဲ့ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
ဂဲလ်လပ်အဖွဲ့အစည်းဟာ နှစ်ပေါင်း (၂၅) နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ မတူညီတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာက ဝန်ထမ်း (၁) သန်းကျော်ခန့်ကို တွေ့ဆုံးမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး "စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသူတွေအတွက် အရေးကြီးဆုံးသော လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် ၁၂- ချက်" နဲ့ "မန်နေဂျာကောင်းတွေက ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ဖော်ထုတ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် အကြံပြုချက် ၄-ချက်" တို့ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကို ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့လက်ခံပြီး ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းနဲ့သာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကို ပိုင်စေနိုင်စေဖို့ကြိုးစားရာမှာ အဓိကလိုအပ်တာတစ်ခုကတော့ "ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်း" ပဲ ဆိုတာကို သိရှိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
"ဒုက္ခအခက်အခဲတွေဆိုတာဟာ လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာ မလွှဲမသွေကြုံတွေ့ရမယ့်အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်" အဲ့ဒီဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကို တွန်းလှန်ကျော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေ၊ စွမ်းရည်တွေနဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေ၊ တွေးခေါ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအယူအဆတွေကို လေ့လာခဲ့ပြီး စာရေးသူ Eric Greitens က "Resilience" ဆိုတဲ့ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ အချက် ၆ ချက်နဲ့ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
စားသုံးသူတွေရဲ့ တွေးခေါ်ပုံတွေကို နားလည်လေလေ၊ မိမိတို့ အတွက် ပိုမိုအကျိုးရှိလေ ဆိုတာကို Marketer ဆိုတဲ့ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေးသမားတိုင်း နားလည်ထားကြပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် Marketerေတွဟာ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ စား သုံးသူတွေ ရဲ့မသိစိတ်ထဲက တိုက်တွန်းမှုတွေကို အလေးထားပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ပျက်ကွက် လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီ video လေးမှာတော့ Harvard တက္ကသိုလ်မှာ မားကတ်တင်းဘာ သာရပ်ကိုအထူးပြုသင်ကြားသူ ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Gerald Zaltman ရဲ့ How Customers Think ဆိုတဲ့စာအုပ်မှ စားသုံးသူ တွေနဲ့ပက်သတ်တဲ့ တွေးခေါ်ပုံတွေ၊ အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေးသမားတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဖော်ပြ ထားပါတယ်။
စားသုံးသူတွေက ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှတ်သားခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ မားကတ်တင်း လုပ် ဆောင်ချက်တွေမှာ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေကို ပစ်ပယ်ဖို့ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘဲ၊ စားသုံး သူတွေရဲ့စိတ်ကူးတွေကို လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကို အသေးစိတ်ဖော် ပြထားပါတယ်။